I-china eyona xabiso liphezulu lokucoca ulwelo lweplastile abaxhasi e-china ukwenziwa kunye nefektri | Xinzheng
Elona xabiso liphezulu lokucoca ulwelo kuncedo lwabacoli e-China
Uncedo lokucoca ulwelo lwe-Perlite yimveliso yeekhemikhali eziyimpuphu kunye nesayizi ethile yamasuntswana efunyenwe ngokwandiswa okukhethiweyo kweesanti zentsimbi encinci, efudunyezwe ngerhasi ehlanjululweyo, kwiziko le-shaft elime nkqo, ukwanda, kunye nokusila nokucoca.
Intshayelelo yoncedo lokucoca ulwelo ngePerlite
Iinkcukacha zoncedo lokucoca ulwelo ngePerlite
Isixhobo sokucoca ulwelo se-perlite simhlophe ngombala, kunye noxinano olukhulu lwemveliso ngama-230～460kg / m3. Ukuxinana kobuninzi obuhlukeneyo, ubungakanani bamasuntswana afanayo, kunye nobubanzi bepore obenziwe ngokwandiswa kweemveliso ezahlukeneyo yimigangatho.
Xa kuthelekiswa nezixhobo zokucoca ulwelo ezifana nomhlaba wokuhlamba i-silica, le mveliso inezinto eziluncedo zesinyithi esingonakalisiyo kunye nezinto ezingezizo ezesinyithi, ukukhanya kobuninzi bokukhanya, isantya sokuhluza okukhawulezayo, kunye nefuthe lokucoca ulwelo.
Ukusetyenziswa koncedo lokucoca ulwelo ngePerlite
Olu ncedo lokucoca ulwelo lwePerlite lusetyenziswe ngokubanzi kwimveliso yokuhluza ngokukhawuleza ibhiya kunye nezinye iimveliso zeshishini, amashishini amayeza, ipeyinti kunye nokwaleka amashishini, kunye nemveliso yepetroleum.
Inkqubo yoNcedo lokucoca ulwelo ngePerlite
I-ore --- Ukwahlula-hlulwa -Ukumisa --- Ukutyisa -Ukunyibilikisa / Ukunyibilikisa--Ukupholisa-- Ukutyumza --- Amanqanaba amaninzi oMoya ohlukanisiweyo-- Ukhetho-- Ukuthotywa kweengcambu-- Ukuxhonywa
Emva kokuba i-perlite yandisiwe emva koko idlulile ekusileni nasekulwiseni, kuyacetyiswa ngenyameko nangobunono kumanqanaba amaninzi ukwenza umphezulu wamasuntswana ungalingani. Inkqubo yokwenza ikhekhe yokuhluza inokucudisa. Umgangatho wokugqibela wemveliso ugugile kwaye baya kulumana. Unxibelelwano lwenza isikhewu sesihluzi esirhabaxa, apho kukho iindlela ezininzi ezingaphakathi emgceni, ezincinci ngokwaneleyo ukuba zinokuthintela amasuntswana anobungakanani be-micron, kodwa kwangaxeshanye zibe ne-porosity ye-80% -90%, kwaye igcine amandla aphezulu okungena.
Uncedo lokucoca ulwelo lwe-Perlite yimpuphu emhlophe eqinileyo eyakhiwe yangamasuntswana eglasi engafakwanga. Izithako eziphambili ziyi-potassium, i-sodium kunye ne-aluminosilicate. Ayinamsebenzi wezinto eziphilayo. Kuyacocwa kukutsha kobushushu obuphezulu ngexesha lenkqubo yokuvelisa, kwaye ubuninzi bayo bubuninzi nge-20% yokukhanya ngaphezu komhlaba we-diatomaceous.
I-GK-110 i-perlite ye-pearlite yamasuntswana oncedo acocekileyo ngamashiti agoso ngokungaqhelekanga, ikhekhe lokucoca ulwelo line-porosity ye-80% -90%, kwaye isuntswana ngalinye linee-poillary pores ezininzi, ke ngoko linokucoca ngokukhawuleza kwaye linokufakwa amasuntswana acocekileyo e-Ultra apha ngezantsi 1 micron. Uncedo olukhethekileyo lwe-perlite yemithombo yeendaba yemithombo yeendaba kukuba igcina izinto eziqinileyo ngelixa igcina inqanaba lokuhamba kwamanzi aphezulu. Inokuzinza okuhle kwemichiza kwaye akukho kungcoliseka. Umxholo wayo onzima we-ion i-0.005%, ke inokusetyenziselwa ukuhluza kwinqanaba lokutya.
Iiparamitha zoncedo lwePerlite zoncedo
K (ngokukhawuleza) Z (phakathi) M (isezantsi)
Ubuninzi bobunzima (g / cm)
Izinga lokuhamba elinxulumene (s / 100ml) 30～60 60～80
Ukuqina (Darcy) 10～2 2～0.5 0.5～0.1
Umcimbi omisiweyo (%) 15 .4 ≤1
102um (150目)Iintlelo aluxhaswanga (%) 50 ≤7 ≤3
Egqithileyo Ukwandiswa kwabavelisi be-perlite e-China
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu wemihla ngemihla oqaqambileyo owandisiweyo wentengiso
Iqondo lobushushu eliphezulu perlite eyandisiweyo iyathengiswa
I-Bentonite Clay Powder yeenwele / ubuso / amazinyo